Hordhac Shirkadeed - Anshun AKF Medical Technology Co., Ltd.
- HORDHAC SHIRKADDA -
Shirkadeena waxay ku takhasustay soo saarida wajiyadda ilaalinta shakhsi ahaaneed ee kn95, maaskaro caafimaad oo qalliin ah, maaskarada madaniga ee la tuuri karo, waxaan leenahay wax soo saarkeena gudaha ee caafimaadka
shahaadooyinka, waxaan ka soo gudubnay heerarka imtixaanka gudaha Gb2626-2006, ajaanibta caadiga ah en149, en 14683, iwm.
Shirkaddu waxay isku daraysaa R & D, naqshadeynta, sumadda iyo wax wada iibinta si ay u noqoto adduun
shirkad caan ah. Marka laga eego aragtida teknolojiyadda fiber-ka, waxaan u soo galaynaa warshadda caafimaadka oo waxaan ku siin doonnaa laba taxane oo waji-gelinno la tuuri karo ah iyo maaskarada kn95 ee bulshada.
Xirfadle madax banaan Kooxda R&D
Sida aan wada ogsoonahay, waxyeelada deegaanka ayaa keentay wasaqowga hawada iyo bakteeriyada kufsiga. Sannad kasta, in ka badan 20 milyan oo qof ayaa u dhinta cudurrada neef-mareenka iyo infekshinka bakteeriyada ee adduunka oo dhan.Mask wuxuu noqday wax soo saar aan looga maarmin nolosheena. Cudurkaan caalamiga ah, maaskaro sidoo kale wuxuu door muhiim ah ka ciyaaray geedi socodka kahortaga cudurka.
Waxtarka sare, isbarbar dhiga qiimaha tayada sare leh iyo sare
Badeecad damaanad qaad ah tayo iyo adeeg
Sannadkii 2020, shirkaddu waxay bilowday inay furto warshaddii maaskarada ee heerkii ugu horreeyay ee cudurrada faafa. Marka la eego duruufaha adag ee adag, shirkaddu si dhakhso leh ayey kor ugu kacday Waqtigan xaadirka ah, maaskaro daboolan oo loo yaqaan 'ankanfuseries' ayaa suuqyada la dhigay tiro aad u tiro badan, iyagoo siinaya alaab aad u wanaagsan dadweynaha si ay uga hortagaan epi-demic una ilaaliyaan caafimaadka.
- SHOWCASE SHIRKADDA -
Anshun AKF Medical Technology Co., Ltd. wuxuu ku yaalaa warshadda E6, warshadaha sayniska iyo teknolojiyada Park, Degmada Xixiu, Liangliu Road, Xixiu District, Anshun City, Gobolka Guizhou, oo ku fadhida aag dhan 3200 m², oo leh 409 m² bakhaar wax soo saar, waxaan leenahay 2000 m² aqoon isweydaarsi iyo 420 xafiiska m and iyo meesha lagu nool yahay.
Shirkadeena waa shirkad isku dhafan R & D, naqshadeynta, soosaarka iyo iibinta. Waxaan go'aansaneynaa inaan siino macaamiisheena adeegga ugu fiican.
Shirkadda 'Shun AKF Medical Technology Co., Ltd' waa shirkad cusub oo ku dhex taal maaskarada, Xulitaanka iyo soo iibsiga qalabka illaa saxiixa heshiiska baakadaha, iyo xulashada mashiinnada, iwm, waxaan go'aansaneynaa inaan ku fiicnaan doonno warshadan. .
Waa inaan hubinaa in maaskaro kasta oo aan soo saarnay ay tahay tan ugu fiican qashin-qubka. U ogolow isticmaale kasta ee maaskarada AKF inuu helo ilaalinta ugu fiican.
- Khariidadda ganacsiga -
Waqtigan xaadirka ah, waxyaabaha Runbo ee maaskaro laga helo ayaa laga helay kuwa badan
dalalka iyo gobollada adduunka oo dhan ,, oo ay ku jiraan Yurub, ka
Mareykanka, Jarmalka, Boqortooyada Midowday ee Ingiriiska, Ustaraaliya, Ruushka, HongKong, iwm. Shirkadeenu waxay door weyn ka ciyaartay mudadii cudurku socday, Waxaan rajaynaynaa in aniga iyo inbadan aan xirfad sare u leenahay